Topiramate အမှုန့် (97240-79-4) hplc≥98% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Topiramate အမှုန့်
SKU: 97240-79-4. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Topiramate မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (97240-79-4) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
ကုန်ကြမ်း Topiramate အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Topiramate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 125 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကိုယ်အလေးချိန်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Topiramate အမှုန့်
Topiramate အမှုန့်, Topomax, Qudexy XR, Topamax ဖျန်း, Topiragen, Trokendi XR
ကုန်ကြမ်း Topiramate အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Topiramate အမှုန့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၏သိမ်းယူမှုတားဆီးဖို့အသုံးပြုကြောင်းတစ်ခုပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ anti-epileptic သို့မဟုတ် Anti-ဖမ်းဆီးရမိမူးယစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားသည်အခြား Anti-epileptic မူးယစ်ဆေးဝါးများကထိန်းချုပ်ထားကြသည်မဟုတ်သူကိုလူနာအကြားအသုံးပြုသည်။ 1 အမေရိကန်များအတွက်4အကြောင်းဝက်ရူးပြန်ရောဂါကတခြား Anti-epileptic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကုသမှုကိုတှနျးလှနျကွောငျးကိုသိမ်းယူမှုရှိပါတယ်ရောဂါ။ Topiramate အမှုန့်ကိုလည်းခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခေါင်းကိုက်ကာကွယ်ပေးသည်။
သိမ်းယူမှုဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြော၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုပ်ရှားမှု ( "ပစ်ခတ်ရန်") ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း, ထိုပုံမှန်မဟုတ်သောလှုပ်ရှားမှုကဦးနှောက်၏သေးငယ်သို့မဟုတ်ပိုကြီးသောအားဝေမျှပြန့်နှံ့။ လုပ်ဆောင်ချက် Topiramate အမှုန့်ရဲ့အတိအကျယန္တရားမသိသောဖြစ်သော်လည်းသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေကဦးနှောက်အတွင်း neurotransmitters ပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Neurotransmitters အာရုံကြောထုတ်လုပ်နှင့်အခြားအနီးအနားမှာအာရုံကြောတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အသုံးပြုဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ neurotransmitters များ၏ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ် action ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုပုံ Topiramate အမှုန့်ဟာသိမ်းယူမှုစေသို့မဟုတ်အခြားအာရုံကြောမှပြန့်ပွားခြင်းမှပုံမှန်မဟုတ်သောလှုပ်ရှားမှုများတားဆီးစေခြင်းငှါဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြော၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုပ်ရှားမှုများဖိနှိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ တခြားလေ့လာမှု Topiramate အမှုန့်ကိုတိုက်ရိုက်အာရုံကြောဖိနှိပ် (ဆိုလိုသည်မှာမဟုတ်ဘဲ neurotransmitters ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်) နှင့်ပစ်ခတ်ဖို့သူတို့ကိုလျော့နည်းဖွယ်ရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏လမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကခေါ်ဆိုပါ။ အများအားဖြင့်, သင့်ဆရာဝန်တဦးတည်း 25-မီလီဂရမ်တက်ဘလက်နှစ်ခုကြိမ်နေ့ရက်တိုင်းတာခြင်းဖြင့်စတင်ပါရန်သင့်အားပြောပြလိမ့်မယ်။ ခဏတစ်ပြီးနောက်, ဆရာဝန်တဖြည်းဖြည်းသင့်ရဲ့သိမ်းယူမှု၏ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုရရန်သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ Topiramate အမှုန့်ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခုကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ယူတတ်သောကြောင့်, လူများစွာနံနက်စာနှင့်ညစာအတူကယူပြီးအားဖြင့်မှတ်မိဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ သင်တစ်ဦးထိုးယူဖို့မေ့လျော့နေလျှင်ဘာလုပ်ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
ဆရာဝန်ဆေးလုံး၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးသစ်တစ်ခုညွှန်းရေးသားခဲ့သည်လျှင်သတိထားပါ။ သငျသညျ 25-မီလီဂရမ်ဆေးပြားကို အသုံးပြု. ခဲ့တာနဲ့အသစ်ကဆေးညွှန်း 100-မီလီဂရမ်ဆေးပြားအဘို့ဖြစ်၏လျှင်ဥပမာ, မှန်ကန်သောအရေအတွက်ကသုံးစွဲဖို့သတိထားပါ။ အလိုအလျှောက်အရင်ကဲ့သို့ဆေးပြား၏တူညီသောအရေအတွက်ကသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်မထားပါနဲ့။ သငျသညျတက်ဘလက်သတ်မှတ်ထားသောထားပြီးအဘယ်အရာကိုအရွယ်အစားကိုသိသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သငျသညျတက်ဘလက်ယူမှန်လျှင်, အသီးအသီးတပြင်လုံးကိုမျိုချ။ ကကိုက်မထားပါနဲ့။ (ဒါဟာအတော်လေးခါးသီးပါလိမ့်မည်။ )
ဖျန်းတောင့ဒုက္ခဆေးပြားမျိုရှိသည်သောကလေးများနှင့်အခြားသူများ Topamax ပေးရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါတောင့မြေတပြင်လုံးမျိုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်သူတို့ကဖွင့်လှစ်ထားပါသည်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုထိုကဲ့သို့သော applesauce, custard, ရေခဲမုန့်, oatmeal, pudding, ဒါမှမဟုတ်ဒိန်ချဉ်အဖြစ်ပျော့အစားအစာ၏တစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဇွန်းပေါ်သို့ဖြန်းကြပါတယ်။ ဤတွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းင်:
သင်စကားလုံးကိုဖတ်ရှုနိုင်အောင်ဖြောင့်မတ်အဆိုပါဆေးတောင့်ကိုင်ထားပါ "TOP ။ "
အစားအစာပေါ်သို့ဆေးတောင့်ရဲ့ contents တွေကိုအပေါငျးတို့သဖြန်း။
ကဝါးခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းတစ်ခုလုံးကိုဇွန်းမျို။ (ကဝါးရဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာခါးသောအရသာပါလိမ့်မယ်။ ) ချက်ချင်းအချို့ရေသို့မဟုတ်အခြားအရည်သောက်သုံးရိက္ခာရှိသမျှကိုမျိုကြောင်းသေချာအောင်ကူညီနိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သုံးစွဲဖို့အစားအသောက်နှင့်အတူရောနှောလျက်ရှိသည်ဆိုဆေးပညာကယ်တင်ဘယ်တော့မှမ။
ကုန်ကြမ်း Topiramate အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
လက်ခြေအတွက်အာရုံခံစားမှု tingling သို့မဟုတ် prickling,
Topiramate အမှုန့်တစ်ဦးမွေးသေးသောကလေးထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းတစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိရှိခြင်းမိခင်နှင့်ကလေးနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သိမ်းယူမှုများအတွက် Topiramate အမှုန့်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာလျှင်ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ start သို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုမပါဘဲကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း Topiramate အမှုန့်ကိုယူပြီးရပ်တန့်မနေပါနဲ့။
သငျသညျမကျြစိကိုပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်နောက်ကွယ်မှရူပါရုံကိုသို့မဟုတ်နာကျင်မှုရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲရှိပါကအရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာကြလော့။ ဤရွေ့ကား, သင်၏ရူပါရုံကိုအပေါ်ပြင်းထန်ပြီးအမြဲတမ်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အစောပိုင်းဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျဒဏ်ငွေခံစားရရင်တောင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဆရာဝန်စကားပြောမပါဘဲ Topiramate အမှုန့်ကိုသုံးပြီးရပ်တန့်မနေပါနဲ့။ သငျသညျရုတ်တရက် Topiramate အမှုန့်ကိုသုံးပြီးရပ်တန့်လျှင်သင်သိမ်းယူမှုတိုးပွားလာကြပေမည်။ သင်လုံးဝဆေးဝါးကိုရပ်တန့်မတိုင်မီလျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပေမည်။
သင့်ရဲ့သိမ်းယူမှုပိုဆိုး get သို့မဟုတ် Topiramate အမှုန့်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်ပိုမိုမကြာခဏသူတို့ကိုရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Topiramate ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း Topiramate အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Topiramate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Topiramate ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Topiramate အမှုန့်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?